Home » သတင်း » အင်တာနက်ကိုတစ်ဦး Borderless Service ကိုသိမ်းဆည်းထားပါရန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းဒါဟာင်
အင်တာနက်ကိုတစ်ဦး Borderless Service ကိုသိမ်းဆည်းထားပါရန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းဒါဟာင်
"ကျနော်တို့ပတ်လည်ကဒီမှာသင့်ရဲ့အလုပ်ကြီးအအထင်ကြီးလေးစားဖြစ်လာပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးကောင်းသောအရာတစ်ခုဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရပေမည်။ " - Randolph, "အခမဲ့ဝီလီ"Warner Bros. , 1993
ပညာရှင်များနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာတကယ်စမတ်ရှိပါတယ် ... ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းတကယ်ကိုနုံနေပါပြီ!
ဝမ်းနည်းပါတယ်, ရှေးရှေး, သင်မူကားဖြစ်ကြသည်။
နောက်ကျောအလယ်ပိုင်း 60s အတွက်သူတို့ ARPANET (Advance သုတေသနပရောဂျက်များအေဂျင်စီကွန်ယက်) ကိုခေါ်ဤအမှုကိုအပေါ်သိပ္ပံနည်းကျသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ဖို့သူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းချိတ်ဆက်၏စေတနာရှိရှိစိတ်ကူးနှင့်အတူတက် လာ. MIT ကရဲ့ (နည်းပညာမက်ဆာချူးဆက်) ချစ်ခင်တဲ့ "Galactic ကွန်ယက်ကို။ " ဟုခေါ်ရသော
2.4 kbps (တစ်စက္ကန့်ကီလိုဘစ်) လိုင်းအမြန်နှုန်းတစ်ခုကနဦးမျက်စိကွယ်မြန်နှုန်းနှင့်အတူသူတို့လေးယောက်အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ပြီးတော့သည်အခြားသိပ္ပံနည်းကျစင်တာများကကျယ်ပြန့် (နှင့်အနည်းငယ်အမြန်နှုန်းလာကြသည်) ။
လောကဓာတ်လုံးကိုမှကအခမဲ့ပါစေ - ထိုအခါ DARPA က (ကာကွယ်ရေးအဆင့်မြင့်သုတေသနပရောဂျက်များအေဂျင်စီ), စီမံကိန်းရန်ပုံငွေသူလူများ, ငါတို့သည်ဤလောကမှလွှတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။
ကဆက်ပြောသည်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံးတစ်ခုမှာ CERFnet (ကယ်လီဖိုးနီးယားပညာရေးသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းက) သည်ကွန်ယက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူသူ၏နာမပေါင်းသင်းဖို့ OK ကိုကြီးလျှင် Push ကို Mohta (ထို San Diego မှ-based ကုမ္ပဏီတခု၏တည်ထောင်သူ) Vint Cerf (အစောပိုင်းအင်တာနက်တည်ထောင်သူတစ်ဦး) ကိုမေးမြန်းနိုင်အောင်အပြစ်မဲ့နှင့်နောက်ပြန်ကြီး ... သူကသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးစည်းချက်-up, VW တို့ဗန်, သူတို့သည်သေတ္တာများ In-dial, ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သမျှလူတွေကိုချိတ်ဆက်ရန်အဘို့အအောင်, သုတေသန, လဲလှယ်စိတ်ကူးများ / သတင်းအချက်အလက်နှင့် ... အီးမေးလ်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်း, ပြည်နယ် running cable ကိုလှည့်ပတ်မောင်း။
နှေး, ထိ မိ. လဲစရာဖက်ရှင်မှာတော့ကွန်ရက်များ၏လွတ်လပ်သော-to-အားလုံးကွန်ရက်ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စီးပွားရေး, ကုန်သွယ်ရေး, အစိုးရ, ဖျော်ဖြေရေး, ဆိရဲ့အလွန်ဘဝတစ်ဦးမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မာကု Wahlberg လတ်တလောဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့်ကြော်ငြာအတွက်၎င်း၏အရေးပါပုံကိုဖော်ပြထားတယ်အဖြစ်, "စားနပ်ရိက္ခာ, ရေ, အင်တာနက်ကိုကျနော်တို့ကအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
ဒါဟာအများအပြားစိတ်ဆင်းရဲမြန်နှုန်း / ဆက်သွယ်မှုနှေးနှင့်အတူနေဖြင့်ရသော်လည်း, 4B ပေါင်းဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းကလူများအတွက်သေချာပေါက်စစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။
၏သင်တန်း, ထိုလက်လှမ်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲသူတို့အစားအစာ, သန့်ရှင်းသောရေ, အမိုးအကာနဲ့တူလျော့နည်းအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်နည်းနည်းအဘယ်အရာကိုပိုက်ဆံကိုအသုံးပြုဖို့သူ 4B ပေါင်းထွက်ခွာမည်။
ဒါကနှင့်အတူအိမ်မှာရှိနေတဲ့မှလာရန်ဆီလီကွန်တောင်ပူဖောင်း (မအစစ်အမှန်ကမ္ဘာက) တှငျနထေိုငျသူမြားကိုသူတို့အဘို့ခက်ခဲတဲ့ပါပဲ။
မြန်နှုန်းန့်သတ်ချက်များ - သင်လည်းအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလွန်း bandwidth ကိုသို့မဟုတ် upload / download speed ကရှိတယ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်; ဒါပေမယ့်အားလုံးကြောင်းဖောက်သည်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကို performance ကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်သင့် ISP ၏စွမ်းရည်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
တချို့လူတွေကကြှနျုပျတို့ပွုထက်အများကြီးပိုမြန်သည်အင်တာနက်ရှိသည်သောစစ်မှန်တဲ့တကယ့် - တောင်ကိုရီးယား, အိုက်စလန်, နော်ဝေနှင့်ဆွီဒင်; ဒါပေမယ့်နေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို "အစဉ်အမြဲပေါ်တွင်" အဘို့ရှိသည်ရှိသည်ပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့အပေါငျးတို့သဖန်သားပြင်ဖြည့်ရန်လုံလောက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုအလျင်အမြန် wireless နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနည်းပညာကိုကျေးဇူးတင်လျင်မြန်စွာ 4.1 မှကြိုတင်မဲပေါင်းဘီလီယံအထိလုပ်
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည် 3G / 4G ဖုန်းများ အသုံးပြု. ပါလိမ့်မည်ယူဆ။
သို့သော်ကံမကောင်းစွာ, 1.6B ပေါင်းရှေးရှေးမိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းမရရှိနိုင်ရှိရာဒေသများတွင်နေထိုင်ကြသည်။
ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများ (အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်တာအရှေ့တောင်ဘက်အာရှ, ပစိဖိတ်, ဆာဟာရအာဖရိက,) တွင်ပြုလုပ်မသာစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ကစျေးပေါမဟုတ်ပါဘူး။
ဒေတာကို Driven - မိုဘိုင်း device ကိုပထမဦးဆုံးတစ်ဦးချင်းစီမှပြောဆိုရန်ကလူကို enable လုပ်ဖို့တီထွင်ခဲ့သည်နေချိန်မှာသူတို့ပျောက်သူတို့ရဲ့စာရေးကိရိယာဖုန်းမှခဲ့ကြသည်ကိုအခြား-လျှင်ပင်, အင်တာနက်နှင့်ဝဘ်န်ဆောင်မှုများအလျင်အမြန်သုံးမိနစ်ဖုန်း 3GB ဒေတာ transfer နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးရူပါကိုပဌနာစေတော်မူ၏။
မိုင်ရာပေါင်းများစွာကွာသင့်ရဲ့ရုံးကနေ - - သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနိုင်ပါသည်မြင်ယောင်ကြည့်ပါနှင့်လူသည်သင်စကားပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာကြောက်မက်ဘွယ် '' freakin ပဲ!
ငါသည်ငါ့အဖေရဲ့မွေးနေ့ဆင်နွှဲဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း၌ရှိ၏နှင့်အိုဆာကာတစ်ဦးကို client / မိတ်ဆွေတစ်ကနေဖုန်းခေါ်လက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်။
ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆင်ခြေအပြင်ဘက်သို့ သွား. တစ် 30 မိနစ်ရှိခဲ့ပါတယ် "အစည်းအဝေးကို။ "
သူကသူ့ steely, စပ်စုမျက်စိနှင့်ငါ့ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မေးလျှင်, "ဘယ်လိုသူကဒီမှာသင်ဖုန်းဆက်ဖို့ကိုသိတာလဲ"
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အများစုကအဘို့, တကယ့်ခေါ်ဆိုခဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းတစ်ရှားပါးဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦး) သူတို့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှငျ့သငျတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုစွန့်ခွာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်; ခ) သင်နှစ်ဖက်စလုံးတစ်ဦးရှိသည်ဖို့လိုခငျြ) တကယ်ရှည်, boring စကားပြောဆိုမှုမလိုချင်ကြဘူးပဲသူတို့ကိုသို့မဟုတ်က c များအတွက်တစ်ခုခုမှတ်တမ်းတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် "ဟုကျမ်းစာလာသတည်းစံချိန်။ "
သင့်ရဲ့အိတ်ကပ် / ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာကြိုးမဲ့အရာလမှယောက်ျား ယူ. သင်တို့အဘို့ကပိုပစ္စည်းပစ္စယမသောကွန်ပျူတာထက်ပိုပြီးပါဝါရှိပါတယ်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များနှင့်ရုပ်ရှင် / ဗီဒီယိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးအပြင်, သငျသညျ / post ကို selfies ပေးပို့ဖို့ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်သင်သိထားရန်လိုအပ်ပစ္စည်းပစ္စယတက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒေတာများကြီးထွားမှု - bandwidth ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အဖြစ် data transfer လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ယနေ့ကအသွားအလာ 80 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ကဝါယာကြိုးဖြတ်ပြီးင်သို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်တစ်ခုအဆုံးမဲ့စီးအတွက် data တွေကိုလက်ခံပေးပို့ပါ။ ဟုတ်မဟုတ်
ကမ်ဘာပျေါတှငျအများသောသူတို့က, ရုံကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာတော့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပညာရေး, သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေး / သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်အတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ... ဒါဟာလွယ်ကူသည်မဟုတ်။
လက်ရှိစျေးနှုန်းများမှာအချက်အလက်များ၏ 500MB တစ်လတောင်အာရှရှိလူများ၏ 83 ရာခိုင်နှုန်းတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ခြင်းနှင့် Sub-ဆာဟာရအာဖရိကတှငျနထေိုငျသောသူတို့အားနီးပါး 90 ရာခိုင်နှုန်း Out-of-ရောက်ရှိသည်။
တောင်မှထို့နောက်ဖုန်းကို (နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်) မကြာခဏအများအပြားအဆွေအမျိုးအလိုက် shared နေကြသည်။
ဒါကြောင့်တတ်နိုင်စေရန်, ထုတ်ကုန် / ဝန်ဆောင်မှု၏စျေးနှုန်းများကိုအစိုးရများသို့မဟုတ်သယ်ဆောင် / ပေးသွင်းပါကထောက်ပံ့ဖို့ရှိသည်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်သော 90 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သလောက် drop ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
အဆင်ပြေရဲ့ရုံကြှနျုပျတို့သညျ "အသေးအဖွဲ" အခက်အခဲကြောင့်ကိုကျော်ရနိုင်ဆိုပါစို့။ ထိုအခါမှသာ device ကို / ဝန်ဆောင်မှုရှိခြင်းသူတို့ကိုအရေးကွီးမြားနှငျ့အဘယျသို့သူတို့သုံးခွင့်ရှိသည်သက်ဆိုင်ရာကြောင်းကိုလူတွေကိုပြသရပါမည်။
မကြာခဏဆိုသလိုသောသူတို့သည်သူတို့ access လုပ်နိုင်သူတို့ကိုနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်အမှုအရာအဖြစ်ပညာရေး / ဖျော်ဖြေရေးတိုးတက်လာဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်အကြောင်းအရာ access ကိုဆိုလိုသည်။
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသိပညာ / ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေတဲ့နည်းလမ်းနှင့်အတူသူတို့ကိုထောက်ပံ့ကြောင့်သူတို့ကိုအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအဘို့အပင်မှသာလြှငျ, နေ့တိုင်းသူတို့ရင်ဆိုင်ရကမ္ဘာ၏အဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်ရန်ဘို့လမ်းကိုပေးသည်။
ဤလူအဘို့, အင်တာနက် access ကိုအစားအစာနှင့်ရေကဲ့သို့မရှိမဖြစ်မဖြစ်မည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်နိုင်ငံအသိုင်းအဝိုင်း, မိသားစုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ, စိတ်ကူးများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ပေးခြင်းများအတွက်အစွမ်းထက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ရေအောက်သွယ်တန်းထားသောပိုက် - သောင်းချီမြန်နှုန်းမြင့် / High-စွမ်းရည် cable ရဲ့မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏ချိတ်ဆက်ကမ္ဘာကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်ကိုဖြတ်ပြီးတင်နေကြသည်။
တကယ်အရေးပါဒေတာကနေတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပေမယ့် ဂြိုဟ်တုကမ္ဘာ့အကြောင်းအရာအသွားအလာအကြောင်းကို 99 ရာခိုင်နှုန်းကရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးတွေကိုဖြတ်သွားတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကတချို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့မဟုတ်သင်္ဘောများ '' ကျောက်ဆူး, ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်နှင့်ငါးဖမ်းကိရိယာများနှင့်တူသောအရာတို့ကိုအားဖြင့် sabotaged နိုငျသညျ။ Heck ပင်ငါးမန်းပုံများစွာကိုကြိုးတွေကတဆင့်ကိုက်ပါပြီ။
ထို့အပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် - အထူးသဖြင့်ငလျင် - တခြိမ်းခြောက်မှုပိုမိုဖြစ်ကြသည်။
ကေဘယ်လ်ဖြတ်တောက်မှုဖြစ်ပျက်နေစဉ်, ထိုင်ဝမ်မြေငလျင်ဟောင်ကောင်ကေဘယ်လ်ကြိုးများပျက်စီးသည့်အခါ 2010 အတွက်ဖြစ်ပျက်ကဲ့သို့သောအခြားလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်အသွားအလာများပေးပို့ခြင်းကဲ့သို့ "အလုပ်န်းကျင်" ရှိပါတယ်။
ဒါဟာပြန်ရခြောက်ပတ်အတွင်းကျော်အနည်းငယ်ယူ "ပုံမှန်။ "
ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ကြိုးတွေတစည်းဖြတ်တောက်အလုပ်တွေအများကြီးပါပဲ။ ဗိုင်းရပ်စ်လွှတ်ပေးပြီးလူတွေယုံကြည်ခွင့်အဖြစ်ဆက်ဆက်မပေးသလောက်ပျော်စရာ (တကယ်အတိုင်လူတွေအညီ):
သူတို့ကတကယ်တက်ရိုက်နှက်နှင့်သူ / သူမ၏စာတမ်းများတစ်နေရာရာမှာအခိုးခံရခြင်းနှင့်နေအိမ်ရဖို့လိုအပ်တယ်လေသူကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်း
ဤလောက၏အစစ်ဇုန်တစ်ခုတစ်စုံတစ်ဦးကပိုက်ဆံကြီးမားတဲ့ cache ကိုရှိပြီးအခမဲ့ကမ္ဘာရတဲ့အတွက်အကူအညီတောင်း 'ဆိုတဲ့ 7B လူတွေကိုသင် outta ရှေးခယျြခဲ့
သင်ပင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ကြဘူးဘဏ် / ကဒ်ကုမ္ပဏီသင့်အကောင့်ခိုးယူထားသည်ကိုတွေ့
ကိုလျက်, Vint, Push ကိုနှင့်အခြားသောအစောပိုင်းရှေ့ဆောင်များနို့စို့သူငယ်ကိုအင်တာနက်ပျိုးထောင်သည့်အခါနောက်ကျော, က "စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့" ခဲ့သော်လည်းအဘယ်သူမျှကတစ်စက္ကန့်တစ်ချက်ကိုပေး၏။
ထိုအခါက Serge, မာကုနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းထွက်တစ်ဦးသည်ဟုဆိုကာကအေးမြ (နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ဆိုနိုင်သည်အမြတ်အစွန်း) ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်သင် web ပေါ်မှာပစ္စည်းပစ္စယကိုရှာဖွေကြကုန်အံ့မယ်လို့တစုံတခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, ရှေးရှေးစကားမပြောနိုင်သောပစ္စည်းပစ္စယ post လူတိုင်းကမှာကြည့်တယ်တဲ့အရာ သို့မဟုတ်မေးခွန်းထုတ်စရာဓာတ်ပုံများ upload ဖို့ဒါမှမဟုတ်မိုက်မဲသောဗီဒီယိုများလူတွေကိုကြည့်ယူစေခြင်းငှါ, ကိုအသုံးပြုပါ။
အရာ "အနည်းငယ်" outta '' လက်နှင့်ပြည်သူများကိုတယ်ဒါ OK ကိုသူတို့မမျှဝေသင့်တယ်ပစ္စည်းပစ္စယမျှဝေပိုက်ဆံပုံးအောင်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ် မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရန်။
အတားအဆီး - ကျနော်တို့မကြာခဏမသက်ဆိုင်သူတို့တှငျနထေိုငျတိုင်းပြည်, ကမ်ဘာပျေါတှငျမညျသူမဆိုနှငျ့ဆကျသှယျဖို့ကအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွယ်ကူစေသည်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်အင်တာနက်ကိုစဉ်းစားနေစဉ်တွင်, နိုင်ငံများနှင့်ရန် / ၎င်းတို့၏နယ်မြေများနှင့်အစိုးရများအနေဖြင့်ဒေတာဆက်သွယ်ရေးတားမြစ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံပေါင်း "ငါသည်အပြစ်ပေး" နိုငျဒေတာအသွားအလာအချို့အမျိုးအစားများကိုကန့်သတ်ပါဘူးနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာရှိသောတိုင်းပြည်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုသုံး / shared နိုင်ပါတယ်သောအရာကိုအပါအဝင်၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်းအင်တာနက်စစ်ဆင်ရေးကျော်ဥပဒေရေးရာထိန်းချုပ်မှုအချို့ကိုအဆင့်အထိရှိပါတယ်။
အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုမိုအစိုးရများလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ဆက်သွယ်ရေး app များကိုပစ်မှတ်ထားနှင့်တကွ, ဆဋ္ဌမနှစ်ဆက်တိုက်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ သူတို့လျှင်မြန်စွာအထူးသဖြင့် Anti-အစိုးရဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းသတင်းနှင့်အတုသတင်းပြန့်နှံ့နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကလူတွေသူတို့အပေါ်သူတို့ရဲ့ GUTS ဖိတ်နှင့်အစိုးရသတင်းအချက်အလက်များမှာပထမဦးဆုံးအက်ကွဲရမပါဘူးဆိုရင်အရာအားလုံးကိုအကြောင်းကိုလူတိုင်းပြောပြနိုင်မယ့် tool တစ်ခုပါစေကောင်းကဘာလဲ?
ထိုအခါလည်းအဲဒီလူမှုမီဒီယာနဲ့ app ရှေးရှေးရောင်းဖို့အွန်လိုင်းဒေတာ scraping, ရှယ်ယာ, ကုန်ဖလှယ်ရေးမှာသိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာတွေရောင်းဖို့အသုံးပြုများအတွက်စျေးကွက်လာမည့်နှစ်တွင် $ 80B WW ထက်တန်ဖိုးရှိပိုပြီးဖြစ်ခန့်မှန်းရသည်။
ကလူ post အဘယျသို့ငြားလည်း, "ပုဂ္ဂလိကနှင့်မိသားစုအသက်အဘို့အရိုသေလေးစားမှု" ကိုလက်ျာနှင့် "လူတိုင်းကသူ့ကိုကိုရည်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် / သူမ၏" 'kinda ဥရောပအတွက်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။
စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စကားရပ်စောင့်ကြည့်ရေးနဲ့တူသောအရာတို့ကိုရှောင်ရှား, များစွာသောနိုင်ငံများတွင်လူပေါင်းစိုးရိမ်ပူပန် (နှင့်ချွတ်လူမိုက်ကံကောင်း) သော iNet ပေါ်တွင်ဆကျသှယျဖို့ပုဂ္ဂလိကလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့် encryption ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်အများအပြားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီများရန်။
အဆိုပါ SIGs (အထူးအကျိုးစီးပွားအုပ်စုများ) တုန်းပဲနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကပဲကုလားကာကိုထိုးဖောက်ဖို့အနည်းငယ်အပိုအလုပ်ကြာတယ်။
အခုဆိုရင်အင်တာနက်ကိုအစားအစာနှင့်ရေကဲ့သို့လူများအဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်လာတော်မူကြောင်းကို, ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏အဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေး သာ. ကြီးမြတ်လွတ်လပ်မှုကိုခွင့်ပြုရန်အမေရိကန်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်အတွက်ဖိအားတိုးပေးဖို့ရှိပါတယ်။
သို့သော်တစ်ဦးကို iPhone, Galaxy သို့မဟုတ်တစ်ဒါဇင်စမတ်ဖုန်းဒါမှမဟုတ် Apple က HP က, Dell ကသို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာတစ်ဦးအကြားရွေးချယ်ရာတွင်မတူပဲ; အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်ရွေးချယ် ISP က (Internet Service Provider) အဘယျကမ်းလှမ်းနေပါတယ် - ဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေး, data ကိုကန့်သတ်, ကုန်ကျစရိတ်။
ဒါကစောစောပိုင်းကအင်တာနက် developer များစိတျထဲတှငျခဲ့အတိအကျဘာမဟုတ်ပါဘူး။ မဟုတ်သလိုအဲဒါကိုပျော်မွေ့သောကြောင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်ကမ္ဘာတွင်သုံးစွဲဖို့အဘို့အလှည့်ကျသောအခါ DARPA ကမျှော်လင့်ထားသောအရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
"ပြီးနောက်သမျှတို့သည်ကြီးမားသောများအတွက်အကျိုးအမြတ်လူတွေမဟုတ်ကြပေမယ့်ပိုပြီး Glenn လိုပဲသူအစဉ်မပြတ်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကို, စည်းမျဉ်းထုတ်လုပ်သူထက်ပိုကောင်းတဲ့စည်းမျဉ်းအနိုင်အထက်ခဲ့ပါတယ်။ "
သမတ at Marken ဆက်သွယ်ရေး
အန်ဒီ, Present.Marken ဆက်သွယ်ရေးမှသြဂုတ်လ 1977 အတွက်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဧရိယာ၌တည်ရှိသောစျေးကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ, စီးပွားရေး / ဈေးကွက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအပေါ် concentrates တဲ့ Full-ဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ် positioning ကို, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး Marken ဆက်သွယ်ရေး Inc ၏ပိုင်ရှင်နှင့်သမ္မတဖြစ်ပါသည် ။ အဆိုပါ 30 တစ်နှစ်အေဂျင်စီကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ အတှေ့အကွုံကို AT & T နှင့် CERFnet အပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတွေနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် Philips က, InterVideo, Ulead, OWC, NewerTech, Sonic, Corel, Matsushita, အထွတ်အထိပ်, ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်အပါအဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း, သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဗီဒီယိုဖြေရှင်းချက်တွေမှာမဟာဗျူဟာနှင့်စျေးကွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်ပါဝင်သည် , Cyberlink, တောင်တန်းကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်, Nikon ကင်မရာ, Plasmon, NTI, ads Tech မှ, အတိအကျကိုက်ညီသော, မစ်ဆူဘီရှီနှင့် Panasonic ။
အန်ဒီ Marken အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
ဂရိတ်အကြောင်းအရာခံစားကြည့်ပါရန်, ဒါဟာအားလုံး Delivery အကြောင်းဖွင့် - ဇူလိုင်လ 11, 2018
IBC PR စနစ်တစ်အမဲလိုက်ခြင်းတောင်တက်မဟုတ် - ဇွန်လ 29, 2018
စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ... ပေါ်ထွက်လာစတင် - ဇွန်လ 27, 2018
ယခင်: IBC 2017: နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်း Spotlight- InfinitySet 3!
နောက်တစ်ခု: မှန်ဘီလူး Metadata Standardization မှတစ်ဦးကအဆင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာ
ကျနော်တို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိနထေိုငျ - ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းကလူနှငျ့ဆကျသှယျဆောင်းပါးများကိုများအတွက်ပစ္စည်းပစ္စယသုတေသနလေးတွေ YouTube နဲ့ Facebook ပေါ်မှာ post အခမဲ့ဗွီဒီယိုကိုပစ္စည်းပစ္စယကျော် skimming, မိသားစုအခန်းတစ်ခန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်အကြောင်းအရာ streaming ။ ကျနော်တို့တောင်မှကြေးပေးသွင်း Netflix နှင့် Amazon Plus အားထံမှပြသထားတယ်အဖြစ် Vimeo ကနေငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် stream ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ service provider ကအတိအကျကျွန်တော်တို့ကို 4K အတွက် 4K စောင့်ကြည့်ပေမယ့်အစားပိုမိုလွယ်ကူစွာ OTT သွားရောက်ကာကြောင့်အနည်းငယ်သေးငယ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုမသွားပါစေပါဘူးသော်လည်းဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာပေါ်တက်ဖမ်းရန်အကြီးပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ "အကြိုက်ဆုံး" လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကနေကလေးတွေကြောင့်န့်အသတ် data တွေကိုအစီအစဉ်ကိုရှင်းပြခဲ့ရတယ်သင်သို့မဟုတ်ငါန့်အသတ်ကိုပဌနာသောအရာကိုသာန့်အသတ်သူတို့ရဲ့ဗားရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၏သင်တန်းက "သူတို့" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကောငျးကြိုးအတှကျ ... သင်ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိလုပ်နေတာ / စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဘယ်အရာကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရန်အမြဲကောင်းတဲ့ပါပဲ။
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ဒါဟာ Borderless ဝန်ဆောင်မှုကိုအင်တာနက်သိမ်းဆည်းထားပါရန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမယ့်" ။ http://www.broadcastbeat.com/its-tough-to-keep-the-internet-a-borderless-service/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။